Masindahy Sebastian, Fla. Manomboka ny fandatsaham-bato - Blog bilaogy Ellicott Dredges
Jolay 1, 2006
Loharano: Ed Bierschenk / TCPalm.com
Sary avy amin'i Eric Hasert / TCPalm.com
SEBASTIAN, Florida - Rehefa nirotsaka ny tehaka nampihetsi-po an'i George Koraly rehefa tonga ny fotoanany ny iraka nampanaovina azy ireo nandritra ny am-polony taonany avy tao amin'ny reniranon'i St. Sebastian, dia nanandrana nanodinkodina ny sain'ny hafa izy izay inoany fa mendrika ny ekena.
Crewman of SubAqueous Services, Inc. ao Orlando dia vonona ny hodi-doha ao amin'ny lakandrano C-54 ao amin'ny sisin-tanin'ny Indiana River-Brevard, any avaratr'i Sebastian ho fanomanana tetikasa dredging hanesorana ny 1.8 million cu yds duck mandritra ny taona maro ho avy. avy amin'ny renirano St Sebastian ao amin'ny faritr'i Indian River.
(Ny dredge dia Ellicott® Brand Series 970 namboarina tamin'ny 1985 miaraka amin'ny 14 ″ suction ary 14 ″ mivoaka.)
Nangataka izy ny sary iray nalaina azy nitafy satrony ny satrobon'ireo naman'ny St. Sebastian River, nanaiky ny fikambanan'ireo mponina teo an-toerana izay niara-niasa tamin'ny sisiny nandritra ny taona maro mba hahatongavana amin'ny fametrahana ny tetikasa dredging. Ny tena zava-dehibe dia nino izy fa fanekena ny Gordon Maltby, ilay namany taloha, izay niaraka taminy tao anaty renirano niaraka tamin'ny antenatenan'ny 1990 mba handrefesana azy ireo ny halalin'ny alàlan'ny muck.
Ny filoham-pirenena Stan Mayfield, R-Vero Beach, izay nandresy ny volam-panjakana ho an'ny tetik'asa $ 18.6 tapitrisa dia nilaza fa nanatontosa izay azon'ny vondron'olona olom-boafidy vita.
"Ny lehilahy iray, ny lehilahy toa an'i George, dia afaka manisy fiovana", hoy i Mayfield tamin'ny lanonana Alarobia tao amin'ny Dale Wimbrow Park talohan'ny nanombohan'ny tetikasa fanadiovana.
Ny tetikasa dia andrasana amin'ny fanesorana ny 1.8 tapitrisa metatra toradroa avy amin'ny reniranon'i St. Sebastian, ao anatin'izany ny lakandrano C-54, izay omen'i Koraly ny fananganana ny ankamaroan'ny muck amin'ny renirano. Ny harambato dia hotehirizina ao amin'ny faritra fangalarana mimo atsimo Micco Road ao atsimon'i Brevard County.
Ralph Brown, ankavia, mpitantana ny tetik'asa momba ny asa fanovozana rano an'ny St. Johns River Management District, ary i Marty Smithson, mpitantana ny Distrikan'i Sebastian Inlet, dia nijery ny toerana fitahirizana 100 hektara ao Micco avy eo an-tampon'ny haavo iray.
Araka ny filazan'ny Talen'ny Mpanatanteraky ny St Johns Mike Slayton, ny fanesorana ny harona amin'ny renirano dia andrasana ny hamerina ny fandriana ranomasina izay ilaina hanohanana ny fiainana aquaty ao anaty renirano.
Ny Subaqueous Services Inc., ao Orlando, dia hanomboka hisitrika ao amin'ny lakandrano C-54 ary miasa atsinanana mankany amin'ny toby Railway any Florida East Coast. Mbola hitohy hatramin'ny volana novambra 30 ity dingana voalohany amin'ny tetikasa dredging ity, rehefa haatoana izany noho ny famerana manatee, ary hamerina ny volana aprily manaraka. Ity dingana ity dia antenaina fa hanaisotra zana-bolan'ny 600,000 cubic mihoatra ny renirano amin'ny vidiny 6.3 tapitrisa dolara, hoy ny filazan'i St. Johns Project Manager Ralph Brown.
Ny dingana faharoa amin'ilay tetikasa eo anelanelan'ny tetezana fiaran-dalamby sy ny tetezana US 1 dia hitranga eo anelanelan'ny aprily 1, 2008, ary Nov. 30, 2010, ary hiteraka fanesorana ny sisa tavela amin'ny tsipika 1.2 tapitrisa cubic.
Saridiho Jim Urick / TCPalm.com
Ny tetikasa tamin'ny voalohany dia nantenaina hanomboka amin'ny sampana lehibe ao amin'ny renirano, saingy niova ny fandaharam-potoana rehefa tonga amin'ny $ 8 tapitrisa avo lenta amin'ny $ XNUMX tapitrisa avo lenta noho ny nanombohan'ireo tompon'andraikitra ny tetikasa. Brown dia nilaza ny fiakaran'ny vidin'ny fananganana sy ny vidin'ny lasantsy tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Tamin'ny fanombohana ny lakandrano, ny akaikin'ny faritra fitahirizan-trondro any Micco, dia nilaza ny tompon'andraikitra ao amin'ny St Johns fa afaka manaisotra harona bebe kokoa izy ireo amin'ny vidiny mora kokoa ary manome fotoana bebe kokoa izy ireo hahazoana famatsiam-bola fanampiny. Mayfield sy solontena hafa hatramin'ny nahazoany ny famatsiam-bola fanampiny ilaina ho an'ny tetikasa, saingy ny tompon'andraikitra dia mikasa ny hifikitra amin'ny fandaharam-potoana nohavaozina.
Jolay hatramin'ny Nov. 30: Ny fanondrahana poaka mihoatra ny 600,000 cubes mahery dia manomboka amin'ny C-54 lakandrano ary mifindra atsinanana mankany Florida East Coast Railway Bridge.
Aprily 1 hatramin'ny Nov. 30, 2007: Vita ny fikororanana teo anelanelan'ny lakan'ny lakandrano sy ny lalamby.
Aprily 1, 2008, hatramin'ny Nov. 30, 2010: Ny fandatsahan-drano hatramin'ny 1.2 tapitrisa metatra toradroa eo anelanelan'ny tetezana lalamby sy ny tetezana US 1.
MITADIAVO NY TAMINY
$ 18.6 tapitrisa: Vidim-bidy amin'ny tetik'ady fanondrahana.
1.8 tapitrisa: Soavaly toratelo hakiho ny halavoana hanesorana ny reniranon'i St. Sebastian.
600,000: tokana koba kanjo nesorina tao anaty renirano nandritra ny dingana voalohany.
Tantara: famoahana TCPalm.com Jolay 13, 2006 • Mpanoratra mpiasa: Ed Bierschenk • Mpampaka sary: ​​Eric Hasert • Mpanakanto mpaka sary: ​​Jim Urick